Jimmy Carter oo noqday madaxweynihii seddexaad oo Mareykan ah ee la siiyo Billada Nobel.
Guddiga Bilada nabada Nobel ee Norway ayaa shalay 11:00 barqanimo shaaca ka qaadey in Madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter uu ku guulaystey Billada Nabada ee loo yaqaan Nobel Peace Prize. Dadka la soo sharaxay ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha ku meel-gaarka ee Afgaanistaan Xamid Krazia.
Carter ayaa biladan ku mutaystey shaqadii la yaabka lahayd ee uu ka qabtey hawlaha nabadeynta, dib-u-heshiisiinta, horumarinta dimoqoraadiyada, xaquuqda aadanaha iyo horumarinta dhaqan dhaqaale ee caalamka sanadihii ugu dambeeyey, waa sida uu hadlka u dhigay guddoomiyaha guddiga Nobel-ka Gunnar Berge.
Heshiiskii nabadeynta Masar iyo Israel ee sanadii 1978 iyo macadkiisa Carter Center ee xaquuqda aadanaha ee uu aasaasy sanadkii 1982 ayaa kuba filnayd tusaale fiicana u noqon karta helida uu Jimmy Carter helay biladaan ayuu yiri Gunnar.
Jimmy Carter oo 78 jir ayaa aad ugu farxay soona dhaweeyey helida uu helay bilada Nabada ee Nobel, mar uu ka hadlayey dareenkiisa ku wajahan Billada Nobel ayuu Cartey yiri ”shaki kuma jiro in billadan ay dadka ku dhiiri galinayso ka shaqeynta Nabada iyo xaquuqda Aadanaha” maruu taleefishinka CNN uu la hadlayey shalay.
Carter ayaa noqday madaxweynihii seddexaad Mareykan ah ee hela Billadan Nabada, waxaana hortiis la siiyey Theodore Roosevelt 1906 halka sanadii 1919-kiina la siiyey Woodrow.
Helida Bilada Carter ee sanadaan ayaa u muuqan karta dhaliil toos loogu soo jeediyey Maamulka madaxweyne Bush iyo weerarada ay qorsheynayaan ee ka dhanka ah wadanka Ciraaq, mar wax laga weydiiyey arintaan guddoomiyaha guddiga Nobel Gunnar Berge ayaa yiri way iska cadahay inay tahay dhaliil aan u soo jeedinayno maamulka wadanka Mareykanka iyo halka uu iska taagey arinta Ciraaq.
Carter ayaa cadeeyey inay tahay musiibo iyo khalad weyn in Mareykanka kalidii uu dagaal ku qaado Ciraaq iyadoo qiimo qaali ahna uu ku noqon doono Marekanka. Carter ayaa noqdey madaxweynihii ugu horeeyey ee Mareykan ah ee soo booqda Kuuba tan iyo sanadii 1928-dii.
Dhanka kale madax badan oo aduunka kamid ah ayaa soo dhaweeysay magacaabista Carter oo ay ka mid yihiin wasiirka koowaad ee dalkan Sweden Görran Persson iyo wasiiradiisa Arimaha dibadda Anna Lindh.